PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - U-Onyango uvuna izithelo zokubekezela
U-Onyango uvuna izithelo zokubekezela
Isolezwe ngeSonto - 2017-01-08 - EZEMIDLALO -
UKUBEKEZELA kukanozinti weMamelodi Sundowns uDenis Onyango, kugcine kuthele izithelo njengoba aqokwe njengomdlali wonyaka ozinze e-Afrika kumaGloCAF Awards abese-Abuja, eNigeria, ngoLwesine ebusuku.
Ayibanga lula indlela ka-Onyango njengoba ebekezelele ukubolekiswa kwiBidvest Wits nakwiMpumalanga Black Aces amasizini ambalwa ngaphambi kokuthi abe ngunozinti wokuqala kumaBrazilians
Ngaphambi kokuthi ayithathe indawo yokuqala lo nozinti wake waba nombono wokuthi kungcono alufulathele unomphela leli qembu laseChloorkop.
U-Onyango (31) odabuka e-Unganda ubebanga ubhedu nabadlali abanohlonze okunguKhama Billiat noRainford Kalaba odlala eqenjini lesizwe laseZambia. nakwiTP Mazembe.
“Kuhle, bekungelula ukunqoba loklomelo ekubeni kade bengiqhathwe nabadlali abasezingeni eliphezulu kakhulu e-Afrika abafana neKhama Billiat noRainford Kalaba.
“Ngithi okuhle kodwa kubona nakozakwethu kwiSundonws ngokunjalo nakubaqeqeshi abakhombise ukungethemba ngokuthi banginikeze ithuba ekutheni ngidlale esigabeni esiphezulu kangaka.
“Ngithanda ukuphinde ngibonge iqembu lakithi lesizwe amaCranes ngokungilekelela ngakwazi ukuyodlala kwi-Afirica Cup of Nations (Afcon).
Lokhu kuyimpumelelo enkulu kodwa bekungeyona eyomuntu oyedwa. Ngeyabo bonke abaseqenjini leSundowns kuhlanganisa, abaqeqeshi nabanye onozinti esibambisene nabo.”
Lo mklomelo ubusugcwalisa impumelelo ka-Onyango ngo-2016.
Uqale ngokunqoba isicoco seligi neSundowns ngendlela esesitayeleni ngokuthi baqoqe amaphuzu awu-71.
Igalelo lakhe emidlalweni yeligi liholele ekutheni anqobe isicoco sokuba ngunozinti wonyaka emcimbini owawenziwe yiPSL, waphinde waqokwa njengomdlali wase-Uganda wonyaka.
Uphinde waba ngumdlali wokuqala wase zweni lakubo e-Uganda ukudlala kwiChampions League nakwiFifa Club World Cup. Manje ungowokuqala kuleliyazwe ukunqoba isicoco seCaf somdlali ohamba yedwana.
Kwimpumelelo ka-Onyango kuphinde kwaqopheka omunye umlando ngesikhathi iqembu lezwe lakubo lifinyelela emidlalweni yamanqamu e-Afcon okokuqala eminyakeni engu-38.
Lokhu kuholele ekutheni amaCranes ahlonishwe yiCaf ngokuba yiqembu lesizwe lonyaka.
Lokhu kuhlonishwa kukaOnyango neqembu lesizwe lakubo kuzoletha ukuzethemba kubadlali bamaCranes emidlalweni ye-Afcon njengoba ezokube eseqoqweni lika-D elifaniswa nelokufa ngenxa yokubakhona kwe-Egypt, Ghana neMali.
“Lonke uhambo ludinga umuntu ozoluqala, “kusho u-Onyanga ophinde abe ngukaputeni we-Uganda.
“Lena yindlela ebheke phambili kubadlali base-Uganda ukungiphonsela inselelo ngokuthi bazame ukunqoba izinto ezingcono. Lokhu kuzogqugquzela abadlali abasakhula nokudingeka ukuthi basebenze ngokuzikhandla.”
UBilliat ozishaya isifuba ngobuqhawe bokuhlabana kweDowns iphindelela uphawule wathi: “Okwenzekile kuwubufakazi bokuthi iSundowns iyisikhondlakhondla. Sikhiphe umqeqeshi ovelele e-Africa, umdlali ohamba phambili nolale isibili. Kuyamangalisa. Sengibheke ukuthi sitholane kowamanqamu ukuze ngimbone ukuthi ubukhali kangakanani uma eyibambe ezweni lakhe.”